Ciyaaryahanka da’da yar ee Tottenham Hotspur Jack Clarke oo amaah ugu biiray Sunderland. | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Ciyaaryahanka da’da yar ee Tottenham Hotspur Jack Clarke oo amaah ugu biiray...
Ciyaaryahanka da’da yar ee Tottenham Hotspur Jack Clarke oo amaah ugu biiray Sunderland.
Tottenham Hotspur ayaa ku dhawaaqday in Jack Clarke uu dhameystiray heshiis amaah ah oo uu ugu wareegayo Sunderland inta ka harsan xilli ciyaareedka 2021-22.
21-sano jirku waxa uu ku jiray cidhifyada kooxda koowaad ee xilli ciyaareedkan, laakiin inta badan waxa lagu xaddiday ciyaaraha 23-jirada, isagoo bangi seddex gool dhaliyay afarna caawiye ka ahaa 15 Premier League 2 kulan oo uu saftay.
Clarke ayaa kaliya hal kulan u ciyaaray kooxda sare ee Spurs xilli ciyaareedkan – isagoo ka soo kacay kursiga kaydka qeybtii labaad ee isreebreebka koobka Europa Conference League ee Pacos de Ferreira – wuxuuna hadda ku qaadan doonaa bilaha soo socda League.
“Waxaan rajeynayaa inaan ku ciyaaro Stadium of Light iyo rajada ah inaan ka mid noqdo kooxda dib ugu soo celisa Championship, waxaan rabaa in aan caawiyo kooxda sida ugu macquulsan, haddii ay taasi tahay gool ama caawin, oo aan xaqiijiyo. waxaan gaarnay yoolkaas ugu dambeeya.”
Tababare Lee Johnson ayaa intaa ku daray: “Jack waa ciyaaryahan hibo leh, waxaana la socday horumarkiisa dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxaan dareemayaa inuu runtii ku soo koray garoonka lixdii bilood ee la soo dhaafay oo uu helay biseyl uu ku lamaanan karo tayadaas.
“Tartanka boosaska seddexaad ee ugu dambeeya waa mid xoogan, waxaana dooneynaa inaan awoodno inaan bedelno ciyaaraha marka aan u dhaqaaqeyno dhamaadka xilli ciyaareedka, Jack wuxuu fahamsan yahay in tani ay tahay koox weyn oo ay u ciyaaraan wax badan, laakiin wuxuu doonayaa inuu ciyaaro. noo noqo ciyaaryahan saameyn leh oo naga caawiya si aan u xaqiijino inaan guul ku dhamaaneyno xilli ciyaareedka.”
Clarke ayaa afar kulan u saftay kooxdii ugu horeysay ee Tottenham tartamada oo dhan tan iyo markii uu ka yimid Leeds United 2019 wuxuuna raacay Trai Hume , Danny Batth iyo Patrick Roberts garoonka Stadium of Light bishaan.
DEG DEG: Qarax khasaare geystay oo ka dhacay MUQDISHO
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Muqdisho (Caasimada Online) – Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax goordhow ka dhacay ka dhacay qaybo ka mid ah gudaha...
Liverpool oo heshiis cusub La saxiixanaysa Sadio Mane
Muxuu Rooble kala hadlay Madaxweynaha cusub ee Imaaraadka? + Sawirro
Daawo: Deni oo khudbad xasaasi ah uga hadlay dagaalkii Boosaaso, fariinna...
Crystal Palace 1-3 Liverpool: Reds oo guul gaartay iyo Arsenal oo...
Maxey ka dhigantahay xil ka qaadistii gudoomiyihii guddiga doorashada heer Federaal...